प्रधानमन्त्रीलाई पत्र :: Setopati
सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू,मलाई केही कुरा भन्न मन लाग्यो पढिदिनुहोला।
अब नेपालको राजनीति यहाँकै हातमा छ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू २०४३ सालको राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनाव इतिहासमा अत्यन्तै महत्वपूर्ण रह्यो।
त्यस चुनावमा राजाको सकृय नेतृत्व मानिरहेको व्यवस्थामा सर्बोपरी नेतृत्वको अर्को दल कायम भएको थियो।
अर्थात दुई दल कायम भएर पञ्चायती व्यवस्थामा निर्दलीयता खत्तम भएर पञ्चायती व्यवस्था भनेरै मात्र थोरै समयसम्म राज्य चलाउन सफल भए।
अनी जनआन्दोलन भयो, राजा विरेन्द्रसँग कुनै चारा बाँकी रहेन, बहुदल आयो। राजा विरेन्द्रसँग देशबासीसँग प्रेम भएको भए, २०३६ सालमा नै जनमतको सट्टा प्रजातन्त्र दिन्थे होला।
२०४३ सालमा म काठमाडौंबाट हाँगामा बसेको चरा चिन्ह लिएर राष्ट्रिय पञ्चायतमा उठी सर्बोपरी नेतृत्वको समूह गठन गर्न सफल भएको थिएँ।
प्रधानमन्त्री ओलीज्यू म राजनीति गर्ने मान्छे भएको हुँदा राजनीति नै नगरी बस्न कसरी सकौंला र । त्यसकारण म अनेक कष्ट, यातना सहेर आजसम्म बसिरहेको छु।
मेरा कुराहरु विभिन्न पत्रपत्रिकामा समय समयमा निकालिराखेको छु। प्रधानमन्त्रीज्यू म एक्लो बाघ कुनै समूह पार्टीबाट सांसद वा मन्त्री भएर म कुनै काम गर्न म सक्दै सक्दिनँ। त्यसैले हुनसक्छ भने मेरो पहिचान बनाइदिनुहोस्। मेरो खास लक्ष्य तीन वटा छन्।
१. पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म दोहोरो लिक ओछ्याई ट्रेन चलाउने जसबाट पहाड, भित्री मधेश र तराईका जनता सम्पूर्णलाई जनतालाई लावान्वित गराउने।
२. हाम्रो देशमा समुद्र नभएको हुँदा साह्रै अप्ठ्यारो परेको छ। त्यसैले समुन्द्रको व्यवस्था गर्ने
३. देशको खेर गइरहेको जलबाट पर्याप्त मात्रामा बिजुली निकाल्ने ।
अरू साना तिना कुराहरूमाः
१. पप्लु, तिप्लु, कौडा खेल छुटाउने, यसबाट देशको प्रसाशन, अदालतको मर्यादा आदि धरासायी भइराखेको छ। एक रूपैयादेखि ५ रूपैयासम्मको खेलबाट सातामा ५ सात हजारसम्म हारजित भईराखेको छ।
महिनामा आफुले कमाएको पैसा दश पन्ध्र हजार खेल्दै जान्छन्, अनि के गर्ने सानो तिनो कामको लागि पनि पैसा असुल्ने प्रथा चलिराखेको छ।
एक थरी ठूलाबडा जुवाडे एक प्वाइन्टको १०० रूपैयासम्म खेल्छन्। त्यसमा एक्काको १ प्याइन्ट मानिन्छ, मेमको १२ प्वाइन्ट मानिन्छ, बास्साको १३ प्वाइन्ट मानिन्छ। एक दिनमा लाखौं लाख हारजित भइराखेको हुन्छ। यसरी देश खोक्रो हुँदैछ, भन्दा सानो तिनो खेल जस्तो लाग्ने तर धेरै धमिरा लागिरहेछ।
२. देशका नवयुवक तथा युवतीहरू विभिन्न किसिमका नशालु चिजले लठ्ठिरहेका छन् ।
३. अर्का थरी अलि फूर्तिला व्यक्तिहरु देशबाट बाहिर पलायन हुँदैछन् ।
प्रधानमन्त्रीज्यू हामीले सानातिना व्यवस्था गर्न सक्यौं भने पनि यस्ता कुराहरु विस्तारै निर्मुल भएर जान्छन् जस्तो मलाई लागेको छ।
यो त हजुरको विभागीय मन्त्रीज्यूहरुबाट पनि सोचेकै हुनुपर्छ। हामीकहाँ साना तिना ताल तलाउ काफी छन् त्यसमा पौडी खेल, फिसिङ खेल, हन्टिङ गर्न दिने अरु फाइदा हुने खेलमा घोडचडी खेल, मोटर साइकिलिङ, साइकिलिङ्ग आदि आदि।
अब हाम्रा पुराना पुराना खेलमा पनि पासा खेल बडो उपब्धीपूर्ण खेल हो। यसबाट धेरै खेल खेल्न सकिन्छ। गाउँका सानातीना बालबालिकाहरु बागचाल, बुद्धिचाल, डण्डीबियो जस्तो पनि राम्रो खेल हो। यसबाट क्रमैसँग चेस, क्यारेम, भलिबल, फुटबल आदि खेलमा लाग्न सक्छन्।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू हजुर बुद्धिमान हुनुहुन्छ, शक्तिशाली हुनुहुन्छ अरू म के भनौं।
बस्नेत नेपाली कांग्रेसका युवा नेता एवम् तरूण दल अध्यक्ष जितजंग बस्नेतका बुबा हुन्।
प्रकाशित मिति: सोमबार, असोज २९, २०७५, २२:२७:००